Baaq taageero ah oo ay Soo Saareen Jaalliyadaha Somaliland ee ku dhaqan waddanka UK iyo Midawga Yurub. |
Baaq taageero ah oo ay Soo Saareen Jaalliyadaha Somaliland ee ku dhaqan waddanka UK iyo Midawga Yurub.
30 Maaris 2022
Jaalliyadaha Somaliland ee ku dhaqan waddanka UK iyo kuwa dalalka kale EU (Midowga Yurub) ayaa si wadajir ah u soo saaray baaqan taageero oo ku wajahan Safarkii Madaxweynaha Somaliland iyo wafdigiisu ku tageen carriga dalka Maraykanka, kaasoo qaatay qaiyaasaha 12 maalmood.
Jaalliyadaha Somaliland ee Baaqan taageero soo saarey ayaa kala ah Ingiriiska, Farans, Holland, Beljim, Finland iyo Jarmalka.
Jaalliyadaha ayaa booqashadan Madaxweynaha iyo wefdigiisu ku tageen dalka Maraykan u arka mid guul ah oo taariikhda galey oo dhaxal gal ah isla markaana midho ka dhasheen. Waa booqasho abuurtey fursado qaaliya oo taageero u noqonayo qaddiyada aqoonsiga Somaliland isla markaana la rajaynayo wax-wada qabsi iyo wadashaqeyn rasmi ah oo dhex mara dalka Maraykanka iyo Somaliland.
Baaqan taageero waxay jaalliyaduhu ku cadeynayaan in haddaladii iyo khudbadihii Madaxweynuhu ka jeediyay goobaha iyo hay’adaha kala duwan ee dalka Maraykanka ay ahaayeen qaar xambaarsan nuxur iyo fariimo culus oo sawir cad ka bixiyay taariikhda iyo jiritaanka dalka Somaliland. Qarnaqsiga iyo doodaha ka dhashay khudbadihii Madaxweynaha ayaa ah kuwa keenay in qaar ka mid ah xubnaha Baarlamaanka dalka Maraykanku iyo madax kaleba ay taageero u muujiyaan qaddiyada Somaliland oo ay mooshi taageero ah ka soo saaraan.
Ugu dambeyn waxa aanu u aragnaa in booqashadani ay noqotey mid sare u qaada karaamada iyo sharafta qaranimada iyo haybadda dawladnimo ee jamhuuriyadda Somaliland.
Gunaanad ahaan waxa aanu ayideynaa oo aan xoojinaynaa fariinta uu xambaarsanaa baaqii Madaxweynuhu shirka ka jeediyay oo ah (Beesha caalamka waxa ku waajib ah inay taageerto raadinta aqoonsiga Caalamiga ah ee Somaliland).